त्यो रात : पनि नीरस र अ’पूरो भयो ! – Life Nepali
त्यो रात : पनि नीरस र अ’पूरो भयो !
कल्पना खरेल – पूर्णिमाको शुक्ल पक्ष जस्तै गरी मेरो उमेर समयले माथि माथि उचालिरहेको थियो । ना’रायणी नदी ज’स्तै गरी कहिले उर्लेर भेल त कहिले मौन उतार च’ढावका साथ अविरल ब’हावसँगै थाहै नपाई बा’ल्यकाल पार गरेर जवानीको रंगहरु भ’रिँदै थिए । मेरो यौ’वनलाई साथ लिएर समयको प्रवाह निरन्तर बगिरहेको थियो । दिन प्रतिदिन स्वभाव चञ्चलिँदै थियो । मनका चाहना र मागहरु समय र उमेरले फेर’बदल गरिरहेको थियो । ***लाइफ नेपाली ****थप समाचारको लागी यो भिडियो” हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस’***,
प्र’कृतिले गु’लाफको फूल जस्तै गरी फ’क्राइरहेको ज’वानीमा अझै सुन्दरी चि’टिक्क पर्ने उ’त्सुकता जागिरेको थियो । आफ्नै प्रतिबि’म्बले आ’फैँलाई म’ख्ख बनाएको भान हुन्थ्यो । म सँगै पढ्ने साथी त धेरै थिए । तर पनि धेरै नजिकको साथी नि’तेश थिए । हामी हाम्रा गाउँको स्कु’लमा सँगै पढ्थ्यौँ’ । हामी दुबैले एसएलसी पनि राम्रोसँग पास गर्यौं । कक्षा ११ सुरू भयो, नितेश र म दिन प्र’तिदिन धेरै नजि’क हुँदै गयौँ, हामी दु’ईका बीच प्रेमको आँ’कुरा प’लाउन सुरू भयो । हामी सा’थीबाट बि’स्तारै प्रेमी’प्रेमिकामा परि’णत भ’यौँ । हरेक श’निबार हामी डे’टिङ्ग जा’न्थ्यौँ । समय बि’त्दै गयो ।
हामी दुईको प्रेम झन् झन् झाँ’गिदै गयो । जब हामी डे’टिङ्ग गएक बेला नि’तेशले मेरो कपाल सु’म्सुम्याउँदै भन्थे— ऋतु, म तिम्रो सा’थभन्दा टाढा क’हिल्यै पनि हुन स’क्दिनँ । तिमी मेरो ध’ड्कनमा छौ । तिमी नै मेरो सं’सार हौ । तिमी नै मेरो मनको नाता हौ । तिमी नै मेरो जिन्दगी हौ भन्थे । हामी दु’ईले हात समातेर जु’नीजुनी सँगै मर्ने सँगै बाँच्ने बाचा गरेका थियौँ । मलाई पनि नि’तेशको अँ’गालोमा ह’राइरहुँ जस्तो हुन्थ्यो । एक दिन नितेशलाई नदे’ख्दा यो संसारमा एक्लो भएको म’हसुस हुन्थ्यो ।
हामी दु’ईको प्रेम दिन प्रतिदिन लैला–मज्नुको जस्तो गहि’रिँदै गइरहेको थियो । मलाई नितेशविनाको जिन्दगी कल्पना गर्न पनि गाह्रो हुन्थ्यो । जब नितेश र म भेट हु’न्थ्यौँ सं’सारको सबै कुरा बिर्सी हामी दुई छुट्टै सं’सारमा ह’राउँथ्यौ । हाम्रो प्रे’मलाई दे’खेर होला ती सुन्दर प्रकृति एवं मानिसहरूले पनि डाहा गरिरहेको भान हुन्थ्यो । हाम्रा प्रेमको चर्चा गाउँघरतिर पनि चल्न थाल्यो । हामी बी’चको स’म्बन्ध घरपरिवारले पनि सुइँको पाए’छन् । नितेश गरिब घरको छोरा थिए । जात पनि नमिल्ने यसै कारणले मलाई छिटो अर्को ठाउँमा वि’वाह गरिदिने मनसाय मेरा घरपरिवारमा भयो । यतिकैमा मेरो विवाहको लागि पोखराबाट कुरा चल्न थाल्यो ।
आफ्नो ब्राह्मण जातको राम्रो घरपरिवार राम्रो केटाको कुरा आएपछि मलाई मेरा बाबा, मामुले मन पराएका केटासँग विवाह गरिदिने निर्णय गर्नुभयो । मैले विवाह अस्वीकार गरेँ, बाबा मामु निकै चिन्तित हुनुभयो । हामीले खोजेका केटासँग विवाह नगरे म आ’त्मह’त्या गरिदिन्छु भन्दै मामु रुन लाग्नुभयो । म दोधारमा परेँ । आफ्नो प्रेमीलाई छोडौँ कि लालनपालन गरी शिक्षादीक्षा दिई १० महिना ग’र्भमा राखी जन्म दिने आमालाई आ’त्मह’त्या गर्न दिऊँ, मेरो मनमा ठूला् अ’न्तद्र्वन्द्व चल्न थाल्यो । मलाई निर्णय गर्न निकै गाह्रो भयो । म पनि मेरा कारणले आफूलाई जन्म दिने आ’माको आ’त्मह’त्या कसरी हेर्न सकुँ ?
घरपरिवाबाट मलाई निकै दबाब आयो, अन्तिममा मलाई बाध्यतामा पारी बाबामामुले खोजेको केटासँग विवाह गर्ने निर्णय भयो । म आकाशबाट खसेको जस्तो भएँ । म मेरो प्राणप्यारो नितेशभन्दा टाढा हुन कसरी सक्थेँ र । मेरा लागि विवाह पनि कुनै ठूलो सजायँ भयो । नितेश पनि मेरो विवाहको कुराले पागल जस्तो भएका थिए । मेरो हात समाएर ऋतु तिमीबिना म बाँच्न सक्दिन भन्दै बिलौना गरेर रुन लागे । म के गरौँ ? मेरा जीवनमा ठूलो पहाड बनी आएको सम’स्यालाई मसँग कुनै विकल्प थिएन । मेरो मनभित्रको आँधीबेहेरीको उति ख्याल गरिएन ।
मेरा अनिच्छाको बाबजुद पनि मेरो विवाह पोखराको सुमन नामको केटासँग तय भयो । विवाहको दिन तोकियो । विवाह भव्य रुपमा सम्पन्न भयो । म सुमनकी बेहुली भएँ । म सुमनको घरमा बुहारी बनी भित्रिन पुगेँ । सबै घरपरिवारले कति सुन्दर बुहारी कति लक्षिनकी रहिछन् भनी प्रशंसा गर्न थाले । मलाई देखेर सबै परिवार खुसी थिए । सुमन पनि निकै खुसी भएका थिए । यतिकैमा राति भयो, मलाई सुमनको साथ सु’हागरात मनाउनुपर्ने भयो । बिचारा सुमन । उनको के नै दोष थियो र ? उनले कस्तो सपना मनभरि बुनेका थिए होलान् ? म र सुमनको एउटै बिस्तरामा रात बित्यो ।
सुमन मनभरिका आफ्ना भावना मलाई वर्षाउन खोज्थे तर पनि म सुमनको न्यायो अँगालोमा बाँधिन सकिनँ । सुमनले पनि मलाई कुनै करकाप ज’बर्ज’स्ती गरेनन् । सु’हागरात पनि नी’रस र अपूरो भयो । सु’हागरा’तमा पनि म मेरो प्रा’णप्या’रो नितेशलाई सम्झेर त’ड्पी नै रहेकी थिएँ । मेरा म’नमस्तिष्कमा नि’तेशको बास थियो । कसरी म सु’मनसँग सुहागरात मनाउन सक्थेँ र ? नितेशबिना मेरो संसार अन्धकार भएको थियो । मुटु त एउटा हुँदो रहेछ, एउटा मुटु कसैलाई दिइसकेकी थिएँ, फेरि कसैलाई दिन नसकिने रहेछ ।
मेरा मनमा उ’थलपुथल भुइँचालो गइरहेको थियो । ती पोखराका सुन्दर प्रकृतिले मेरो मनभित्रको उथलपुथललाई बुझ्न खोजिरहेको भान हुन्थ्यो । सुमनको अति सुन्दर महल मेरो लागि मसान घ’रजस्तै भएको थियो । मेरो आँ’खामा वर्षाको झरीजस्तै झरी बर्सिरहेको थियो । मेरो मन केही गरे पनि खुसी हुन सकेन । सुमन मेरो खुसीका लागि धेरै ठाउँ घुमाउन लैजान्थे । पोखराको सुन्दर प्रकृति र सुन्दर सहरभित्र म आफैँ हराइरहेको महसुस हुन्थ्यो । केही गरे पनि म खुसी हुन सकिनँ । धेरै रातहरू सुमनको साथ बिते, म कहिल्यै पनि सुमनको न्यायो अँ’गालोमा बाँधिन सकिनँ ।
सुमन मेरो मन जित्न धेरै कोसिस गर्थे, उनका मनभरिको भावना र चाहना मलाई वर्षाएका हुन्थे तर पनि मेरा मनले सुमनलाई स्वीकार गर्न सकेन । यस्तै गरी छ महिना बित्यो, सुमनका सिँदुरले मात्र मलाई रंगायो । सुमनको निर्दोष भावनाले मलाई रंगाउन सकेन । म आफूले आफैँलाई प्रश्न गर्थे किन सुमनको वि’शाल एकोहोरो मायालाई मेरो मनले ति’रस्कार गरिरहेछ ? बिचरा सुमनको के नै दोष थियो र ? मेरो नितेशसँग फोनमा कुरा भइरहन्थ्यो । मेरो बेहाल देखेर नितेश निकै दुःखी हुन्थे । ऋतु ! तिमी सुमनकी भइसक्यौ, सुमनसँग खुसी भएर बस, म जतिसुकै घा’इते भए पनि तिम्रो खुसी मेरो खुसी हो ।
ऋतु ! तिमीले आफूलाई सम्हाल भनी नितेशले सम्झाउँथे । तर, पनि नितेशसँगको प्रेम झनै मेरो विवाह पश्चात नटुट्ने डोरी जसरी लम्बिँदै गयो । सागरसरी गहिरिँदै गयो । मनै मनको नाता अझै कसिँदै गयो ! य’तिकैमा मेरो बीएको परीक्षा आयो । मैले चितवन माइतीमा गएर परीक्षा दिनुपर्ने भयो । म माइत गएँ । परीक्षा पनि दिएर सकियो । मेरो नि’तेशसँग धे’रैजसो भे’ट भइरहन थाल्यो । म फेरि नितेशको न्यानो अँगालोमा ह’राउन थालेँ । साँच्चि नै यस मनले नितेशको न्यानो अँगा’लोबाट अलग हुन चाएन । हामी दुवै छुट्टिन नसक्ने अवस्था भयो । फेरि हाम्रो मिलन भयो । हामी दुवै सँगै जिन्दगी बिताउने निर्णयमा पुग्यौँ ।
म नितेशका घरमा नितेशकी जीवन साथी भएर एकसाथ हामी बस्न थाल्यौँ । नितेशसँगको साथ मेरो लागि स्वर्गसरी भयो । नितेशसँगका मिठामिठा क्षण अति नै रोमाञ्चक भए । म नितेशका नयाँ स्नेही व्यवहारले अझ लट्ठ हुँ’दै गएँ । बिस्तारै बिस्तारै उनीप्रति सदाका लागि स’मर्पित भएँ । य’स्तै अति मि’ठो क्षण बिताउँदै थियौँ । आखिर मैले मे’रा जीवनको खुसी पाएँ तर समाजका दृ’ष्टिले हे’र्दा मैले सुमनप्रति घा’त गरिरहेकी थिएँ । एउटा निर्दोष र अनजान व्य’क्तिलाई धो’का दिँदै छु भन्ने मलाई एक मनले भ’न्दथ्यो भने अर्का मनले आफ्नो खुसी पाएर म’ख्ख बनाउँथ्यो ।
म लामो समयसम्म सुमनको घर पो’खरा नफ’र्केपछि सुमन मलाई लिन चितवन मेरो माइतीघर आएछन् । त्यस समय म सुमनकी नभएर नितेशको भइसकेकी थिएँ । बु’द्धिले सुमनलाई धो’का दिनु हुँदैन भन्थ्यो भने भावनाले नितेशलाई छोड्न मानेन । सुमन म प्रतिको एकोहोरो प्रेममा गहिरी सकेका रहेछन । बु’द्धि र मनको कुस्तीमा मेरो जीवन मि’चिँदै थियो । साँ’ढेका जु’धाइमा मिचिएको बाछो जस्तै बनेर । जहिले पनि मसँग ऋतु ! तिमीजस्ती अ’प्सरा जीवनसाथी पा’उनु मेरो भाग्य हो भन्ने गर्थे ।
सुमनको एकोहोरो प्रेमले मलाई निकै आभारी बनाएको थियो । तर, के गर्ने साच्चिँ नै मुटु त एउटा हुँदो रहेछ, एउटा मुटुलाई दुई ठाउँमा बाँड्न नमिल्ने रहेछ । छ महिनाको सुमनसँगको साथमा मलाई सुमनले कहिल्यै पनि मेरो इच्छा विपरीतको कुनै दबाब दिएनन् । वि’धिपूर्वक बिहा गरेकी श्रीमती भए पनि मैले उनलाई लो’ग्नेले पा’उने अधिकार उपभोग गर्न दिइनँ । उनले मेरो मन जित्न निकै कोसिस गरेका थिए । तर पनि मेरो मन मु’टु क’हिल्यै सुमनलाई दिन सकिनँ । क’हिल्यै मेरो माया दिन सकिनँ ।
आखिर म आफ्नै प्रेमी नि’तेशसँग साथ हुन पुगेँ । नितेशको प्रेममा रमाउन पुगेँ । नितेशको अँगालोमा हराउन पुगेँ । नितेशसँग जिन्दगी बिताउने निर्णय गरेँ । यो सबै कुरा सु’मनलाई थाहा भयो । सुमनले आफूलाई सम्हाल्न सकेनन् । उनले मलाई पत्र लेखेछन्– मेरी प्रा’णप्या’री ऋतु‘ ! जन्मौ जन्म तिमीलाई प्यार, तिमीले जे गर्यौ राम्रो गर्यौ । तिम्रो केही दोष छैन । प्रिया, तिमी मेरो ध’ड्कनमा हरदम रहने छौ । प्रिया, तिमी भौ’तिक रुपमा मेरो साथ नभए पनि मेरो प्रेम तिम्रो साथ सदासदाको लागि रहनेछ ।
मेरो स’म्पूर्ण सम्पति ऋ’तुलाई दिनु ऋतुको कुनै दोष छैन भनी बाआमालाई स’म्बोधन गर्दै लेखेको पन्नाको पत्र सि’रानीमा राखी विष सेवन गरेर उनी सदासदाको लागि यो संसारबाट बि’दा भएछन् । म मेरो नितेशसँगको पुनर्मिलनले संसारको सबै कुरा बिर्सिएर रमाउँदै थिएँ । ए’क्कासी सुमनका मृ’त्युको ख’बरले मलाई आ’काशबाट खसेको जस्तो भयो । म भाववभोर भएँ, सुमनले मप्रति गरेको मायालु व्य’वहारले क्ष’तवि’क्षत भएँ । सुमनले मायाको भिख मागे पनि मैले माया दिन सकिनँ । जी’वनको भिख मागे जीवन दिन सकिनँ । उफ् मलाई निकै पश्चात्ताप भयो, जिन्दगीभर प’श्चाताप भइरहेको छ … !
Previous विश्वकै अग्लाे कलश बागलुङमा निर्माण हुँदै – सेयर गरौ !
Next ‘दिनभरि ड्युटीमा हुन्छौँ, काम नै हाम्रो भ्यालेन्टाइन्स डे हो’
हो,सियार ! यी रो,ग छन् भने क,हिल्यै न,खानुस् काउली